Tags: သီတဂူ - Sitagu sidagu thitagu thidagu insein D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Dhamma Dana Documentary
Tags: Travel worlds largest biggest book buddha buddhist tipitaka mandalay 729 marble tablet tripitaka king mindon canon sutta sutra Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ...
Tags: ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် _ doctor mintinmon drmintinmon dr.mintinmon dr mintinmon dr min tin mon withotedimag withotedi wi thote di nibban nateban nibbana natebana Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး “နိဗ္ဗာန်တ...
“နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်တရားတော်” - ဗန်းမော်ဆရာတော်
2011-ခု၊ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Theravada...
Tags: “နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်တရားတော်” - ဗန်းမော်ဆရာတော် , Bamaw Syardaw , NateBan , Nate Ban Door Open , NateBanTaGarPhwint , BaMawSayardaw Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / Slideshows Monk donates food at Insein...
Tags: အင်းစိန်ထောင်အလှူ , Shwe Pyi Thar Sayardaw donates food prisoners Insein Jail , U za wa na , Mettashin Shwe Pyi Thar Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / Slideshows Oct 18 2011 Mr. Er Ang...
Mr. Er Ang Hooa (Singapore) donated Breakfast and Lunch for monks - on his birthday Oct 18 2011. Sagaing Hill,
Tags: Oct 18 2011 Breakfast and Lunch for monks - Mr. Er Ang Hooa's Birthday Donation စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ဦးကောဝိဒ sagaing hill donation Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ နှစ်ငါးဆယ...
နှစ်ငါးဆယ်ကြာကအိပ်မက် ယနေ့တစ်ကယ်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ - ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိသရ ( D.Litt, Ph.D )
Tags: နှစ်ငါးဆယ်ကြာကအိပ်မက် ယနေ့တစ်ကယ်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူဆရာတော် Dream from 50 years ago really came true Dr.AshinNyanNateThaYa Dr Ashin NyanNateThaYa ThiTaGuSaYaDaw ThiTaGu Thi Ta Gu sayardaw Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / High Resolution သီတဂူဆရာေ...
Tags: သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ၏ပုံတော် ThiDaGu Sayardaw Thegonesayardaw ashin nyannatethaya M - Myout Oo Sayartaw Ashin Waryar Mainda - အရှင်ဝါယာမိန္ဒ(မြောက်ဦးဆရာတော်) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] 006 Mrauk U Sayadaw...
Tags: mrauk mamatenatenaw sayadaw Pages: 12of 2